Midoboka ao anaty horohoron-tany amin'ny présidence Endurance | Androidsis
Ny fiaretana no prequel an'ny Aliment hanohy izany hetsika fampihorohoroana eny amin'ny habakabaka izany
Manuel Ramirez | | Lalao Android
Ny fiaretana no santionany amin'ny lalao hetsika mampihoron-koditra mahaliana tonga tamin'ny herintaona, Aliment. Mitohy amin'ny estetika mitovy amin'izany ihany koa sy ny tranokalan'ny tsy fahazoana antoka izay ahitantsika ekipa iray izay novaina ho zombie.
Lalao miaraka amin'ny zavakanto pixel izay tokony hitantanantsika ny toetrantsika hahitana izay mitranga ao amin'ity sambo kely ity, ampiasao ny totohondry hanalana ireo zombie eo afovoany ary hanatsara ny statistikanay afaka mandroso tsara amin'ity tetika mahaliana ity. Ataovy.
1 Tetik'asa fampihorohoroana eny amin'ny habakabaka
2 Mikaroha ary alao sary an-tsaina ny teti-dratsy ao amin'ny Faharetana
3 Lalao vita tanana
4.1 Ny tsara indrindra
4.2 Ratsy indrindra
Tetik'asa fampihorohoroana eny amin'ny habakabaka
Ny marina ananan'i Ivan Panasenko nahita saga iray manontolo niaraka tamin'i Aliment ary amin'ity tranga ity amin'ny fiaretana. Lalao roa izay milomano amin'ilay lalao nilalaovany ihany izy ireo izay tokony hamotopotorana, tandremo sao voaongotra izahay ary mahita ny tetika miaraka amin'ny fanehoan-kevitra izay mitaona ny tsy fahatokisana sy ny ahiahy.
Un lalao mampihorohoro eny amin'ny habakabaka izay ananantsika koa ny karazana fitaovam-piadiana hampiala antsika amin'ny làlan'ireo ekipazy izay mpiara-dia taloha taloha ary ankehitriny dia niova ho karazana zombie noana ràn'olombelona izy ireo.
Ny marina izay manomboka amin'ny fotoana voalohany dia mora tohina daholo ny zava-drehetra ary iray hafa amin'ny zava-bitan'ity developer indie ity. Mila mitarika ny tenantsika amin'ny sari-tany mini miaraka amin'ireo teboka mena sy fotsy isika mba hanatratrarana ireo tanjona hamela antsika hamita ny haavony.
Mikaroha ary alao sary an-tsaina ny teti-dratsy ao amin'ny Faharetana
Ankoatra an'io andiana tanjona io koa afaka mandeha mijery ny tranga tsirairay isika avy amin'ny sambo hahazoana kitapo fanampiana voalohany, fitaovam-piadiana ary gadget hafa. Izany dia nilaza fa afaka mividy fitaovam-piadiana isika ary manatsara ny antontan'isan'ilay mpihetsiketsika amin'ny alàlan'ny fijerena horonantsary fanaovana dokambarotra; Mahaliana ity lafiny ity ary fomba iray hanomezana valisoa ny asan'ny developer izay mamorona lalao tena mahaliana.
Misy izany mitandrema tsara amin'ireo fanehoan-kevitra satria milaza izy ireo fa mahita isika inona no mitranga eto amin'ity sambo ity. Ampahany tena mahaliana izy io ary manome ny mombamomba azy ilaina hanohizantsika ny fanadihadiana ity saga ity, azo antoka fa hanana famotsorana iray hafa raha ny fahombiazana tratrarina; raha ny marina ilay voalohany dia nahatratra antsasaky ny tapitrisa fisintomana tao amin'ny Play Store.
iray hafa amin'ireo hira malaza dia ireo NPC na tarehintsoratra tsy mpilalao ary izany dia hanampy antsika amin'ny ady amin'ny fotoana mahery miaraka amin'ny zombies. Tokony holazaina fa manana "fiainana" roa azo atao mifamatotra amin'ny fahitana dokambarotra roa isika. Avelany isika "hitsangana amin'ny maty" ilay mpiaro antsika mba hahafahantsika manohy amin'ny famotorana sy ny fandrosoana amin'ireo ambaratonga maro ireo.
Lalao vita tanana
Azonao atao ny mahita fa amin'ny Faharetana ny zava-drehetra dia avy amin'ny filan'ny nofo avy amin'ny mpamorona azy. Hanoro hevitra hatrany ny lalao tahaka an'ity izahay satria manana izany fikitika manokana izany izy ireo amin'ny lalao mandroso sy maina kokoa izay manandrana mamoaka ny euro amin'ireo mpilalao; ary ny marina dia indraindray "maharikoriko" loatra ny zavatra hitanao ao amin'ny Play Store.
Ny fiaretana dia lohanteny nametrahana ny pixel rehetra miaraka am-pitiavana. Raha ny fahitana azy dia misy io fihenjanana io noho ny zavakanto pixel sy feo avy amin'ny atmosfera izay mametraka ny zavatra rehetra apetraka. Mijanona miaraka amin'izany fampihorohoroana izany isika ao amin'ny tetika sy ny fomba hahitantsika izay mitranga ao amin'ilay sambo toha.
Raha tsy nanandrana an'i Aliment ianao, Eo anelanelan'ny fiaretana sy izany dia hanana fotoana mahafinaritra ianao lalao hetsika. Fahatongavana lehibe avy amin'ny mpamorona indie ary avy amin'ireto andalana ireto no ekenay mba hanohizany miasa toa izao. Manana izany maimaim-poana ianao amin'ny kinova karama raha te-hanohana ny asan'izy ireo ianao.
Miverina indray izy miaraka amin'ny tetika lehibe sy ilay traikefa nahafinaritra an-habakabaka ahafahana mamoaka mistery amin'ny lalao hetsika.
Ny atmosfera sy ny tetika noforonina
Fotoana isan-karazany amin'ny lalao
Mihatsara ny ady rehefa mandray fitaovam-piadiana isika
Amin'ny Espaniôla izany miaraka amina fifanakalozan-kevitra mampiahiahy
Indraindray ianao mahatsikaritra "lag" kely
Faharetana: toerana maty
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny fiaretana no prequel an'ny Aliment hanohy izany hetsika fampihorohoroana eny amin'ny habakabaka izany
Ahoana ny fifehezana Spotify sy mpilalao hafa amin'ny Galaxy Note 10 (sy Galaxy hafa) amin'ny PC
Mamorona mpiady telo hiatrika mpilalao hafa ao amin'ny Arena Go 111%